Nosokafana tamin'ity androany ity ny fankalazana ny faha 60 taonan'ny antenimieran-doholona. Fanompom-pivavahana tao amin'ny Ekar Saint Joseph Mahamasina no nisantarana izany fankalazana izany.
Efa nampihatra ny pôlitika-pitsitsiana ny fitondrana hisorohana ny fandaniam-poana ny volam-bahoaka araka ny baikon’ny filohan’ny repoblika Andry RAJOELINA. Efa hita soritra izany teny anivon’ireo ministera sy ireo sampandraharaham-panjakana.
Efa nahitana fivoarana ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara raha ny tsikaritr'ireo mpanara-baovao, raha niainga tamin’ny zava-nitranga teny amin'ny Antenimieram-pirenena ny talata teo.
Voafidy ho filohan’ny Antenimieram-pirenena i ramatoa Christine RAZANAMAHASOA ny talata teo nandritra ny fivorian’ireo solombavambahoaka teny amin’ny Antenimieram-pirenena. Lany zato isan-jato tsy nisy nitsipaka ny tenany nandritra izany.
Teo anoloan’ny kianjaben’ny Mahamasina no nifarana ny dian’ny BAREA ny sabotsy lasa teo. Teo no nisaoran’ny filoham-pirenena azy ireo, tamin’ny anaran’ny vahoaka Malagasy.
Nitondra avo ny voninahim-pirenena, nampiray ny malagasy, ary namela tantara eo amin’ny sehatry ny baolina kitra, sy ny tantaram-pirenena ny BAREA. Niaina ny tsy nampoizina ny BAREA sy ny Malagasy tsy vaky volo. Na tsy nitondra ny amboara nody aza ny BAREA, nandresy ny ekipa tamin’ny fahazoana ny fon’ny Malagasy rehetra manerana izao tontolo izao. Sambany tokoa tao anatin’ny 59 taona nahazoana ny fahaleovan-tena no niara nitepo, sy nitondra ny tanindrazana am-po sy an-tsaina toa ireny ny Malagasy.